Shirka Dib U Heshiisiinta iyo Nabadaynta Ee Beelaha Koonfurta Gobolka Sool Oo Maanta Markale Si Rasmiya Ugu Furmay Magaaladda Laascaanood – somalilandtoday.com
Shirka Dib U Heshiisiinta iyo Nabadaynta Ee Beelaha Koonfurta Gobolka Sool Oo Maanta Markale Si Rasmiya Ugu Furmay Magaaladda Laascaanood
Laascaanood (Somalilandtoday)- Shirka dib u heshiisiinta iyo nabadaynta beelaha koonfurta Gobolka Sool ayaa saaka ka furmay magaalo madaxda gobolkaasi ee Laascaanood,kadib muddo 7 cisho ah oo shirku fasax galay loona fasaxay shirar gaargaara oo beelugu dhexdooda lahaayeen, beelahan oo uu dhex maray dagaal geystay khasaaro badan oo naf iyo maalba leh ayaa saaka garnaqiisa iyo kala gurka wixii kala gadhay loo saaray gudi cullimo ah kuwaasi oo dhegaysan doona gudiyo ka kala socda beelaha diririrtu dhexmartay.
Wefti balaadhan oo ka kooban Wasiirka Arrimaha Gudaha Mudane Maxamed Kaahin Axmed, Wasiirka Wasaarada Waxbarashadda prof; Yaasiin X. Maxamuud Xiir (faratoon), wasiirka Horumarinta biyaha Mudane Saleebaan Cali Koore, taliye ku-xigeenka ciidanka bileyska Sareeye Guuto C/raxmaan Liibaan Fooxle iyo Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland ayaa in mudo ahba u jooga gobolka sool, xallinta dagaalkan sokeeye ee dhexmaray labadan beelood ee walaaha ah. Shirkan ayaa sidoo kale waxa iyaguna ka soo qaybgalay cuqaasha, waxgaradka iyo waayeelka labada beelood ee dirirtu dhex martay.
Ugu horeyn waxa shirkaasi ka hadlay Badhasaabka Gobolka Sool C/rashiid Xuseen Cabdulle (gargaar), waxaanu munaasibadaasi ka sheegay habsami u socodka shirkani iyo dardaaran ku wajahan labada beelood ee walaalaha ah. Dhanka kale gudoomiyuhu waxa uu ka soo qabygalayaasha ugu baaqay in ay dedaal dheeraad ah ku bixiyaan daminta iyo boogo-dhayista dagaalkan iyo sidii ay nabada uga shaqayn lahaayeen.
Wasiirka wasaarada arrimaha gudaha ayaa shirkaasi ka soo jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa taasi oo uu kaga sheekeeyey colaadan iyo dhibka ay ku keentay bulshada kala duwan ee degan deegaanadaasi aynu soo sheegnay. Dardaaran iyo hogo-tusaalayn dheer oo uu wasiirku u soo jeediyey cuqaasha labada beelood ee dirirtu dhex martay ka dib waxa uu halkaasi ka sheegay nuxurka ugu weyn ee maanta shirkani daaranaa, kaasi oo ahaa; guda-galka dhegaysiga dacwadaha labada dhinac iyo cida loo xil saaray in ay hawshaasi fuliso iyo waxyaabaha looga baahan yahay labada dhinac ee is haya, waxaanu hadalkiisa ku bilaabay; maanta laga bilaabo waxan dhegaysiga iyo ka garrniqista dhacdooyinkaa colaadeed ku wareejinaynaa Gudi hawshaasi gasha kuwaasi oo iskugu jira Cullimada iyo garaadada gobolka sool waxaanay tiradoodu ka kooban tahay 20 xubnood. Dhanka kale waxan soo xulnay ergooyinka labada beelood uga qaybgali doona shirkaasi kuwaasi oo tiradoodu ka kooban tahay midkiiba 21 oday, sidaa darteed waxan maanta idiin cadaynayaa in hawshaasi ay si rasmi ah u wadi doonaan gudidaasi, ka xukuumad ahaana waxan kala shaqayn doonaa wax kasta oo ay nooga baahdaan, waxanan si mug leh u fullin doonaa go’aamada iyo xukunada ay gudidani soo saaraan.
Wasiirk wasaarada waxbarashadda Mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir ayaa isaguna munaasibadaasi ka hadalay, waxaanu aad ugu dheeraaday maxsuulka iyo foolxumada uu keenay dagaalkan sokeeye ee dhexmaray labada beelood, waxaanu sheegay in dagaalkaasi u soo jiiday guud ahaan bulshada gobolka sool ceeb iyo wax aan dhaqan ahayn, sidaa darteed waxa uu wasiirku kula dardaarmay odayaasha, cuqaasha, garaadada iyo waxgaradka bulshaweynta gobolka sool in dhan looga soo wada jeesto daminta colaadan.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland, Mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa shirkaasi soo Afmeeray, waxaanu dardaaran u soojeediyey cuqaasha labada beelood ee shirkani loo qabtay. Waxaanu xusay in nabadu tahay furaha horumarka iyo badhaadhaha sidaa darteed waxa uu gudoomiyuhu bulshada gobolka sool oo dhan u soo jeediyey in laga wada shaqeeyo xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba nabada iyo wada noolaanshaha ummada.
Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay caaqilada labada beelood ee dirirtu dhexmartay waxaanay halkaasi ka cadeeyeen in ay raali ku yihiin shirkan iyo in ay nabad buuxda oo ay qaataan wakiil uga yihiin beelohooda iyo shacabka ay matalaan.
Sidoo kale waxa iyaguna shirkaasi ka hadlay masuuliyiin tiro badan oo kala ah; wasiirka horumarinta Biyaha Saleebaan Cali Koore, Taliye kuxigeenka Ciidanka Bilayska Sareeye guuto C/raxmaan Liibaan Fooxle, gudoomiyaha gudida cullimada, Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil iyo masuuliyiin kale.